Help me understand the difference between mapostori vaya vanofeka maGemenz nema porofita Help me understand the difference between mapostori vaya vanofeka maGemenz nema porofita
Help me understand the difference between mapostori vaya vanofeka maGemenz nema porofita
Hie aunt nevedare. Ini ndinonzi Charmaine, ndawuyawo padare kuzo dzidza. I would like u to help me understand the difference between mapostori vaya vanofeka maGemenz nema porofita (Man of God) vakaita sana Magaya. I am not writing this to insult anyone or kukonzeresa mhirizhonga kungodawo kudzidza.
Ndinopinda church inoita zve deliverance uye vachipa prophecy. Church iyi iri very similar to PHD ministries asi ndinopindira ku Jhb. Now dambudziko rangu or mubvunzo wangu unobva pakuti there are times pandinenge ndichidawo prophecy muhupenyu hwangu or ndiri kudawo kunzwa or kuziva what is happening in the spiritual realm or even to seek for guidance.
Handiti vana Elijah nana Elisha mu bible vaiti if they cross your path your situation would change for the better, vaito kupa zano, kana mhinduro. like the widowed woman akanzi go to your neighbors and collect as many bottles as you can kana wava nawo ma bottles aya fill them up with oil wototengesa oil and sustain yourself and ur son. Padambudziko remu kadazi uyu akatowana solution.
Sezvanda tawura ini ndinopinda church yakada kufanana ne PHD ministries asi muchurch iyi handisati ndakambo piwa Prophecy, handisati ndakambo manifester, I have never been delivered zvinoitwa vamwe. I cant even give an earth shaking testimony zvinoita vamwe.
Ku church yandino pinda vano gara vaka tawura nezve maPostori vachiti these white garment churches ndokunobva ma marine spirits. Kana mukano Jorodwa unodzoka wava ne mweya yetsvina or ma spiritual husband or whatever other problem. Ukaenda uchitemwa nemusoro unodzoka wapora musoro asi unenge wava kunzwa mudumbu so u would have to go back again. Uye vanenge vachiti urikuda kuva millionaire asi uri kuenda kumunhu asina kana mota, urikuda kugara muBig house asi uri kuenda kumunhu ariku roja muka 1 room. How then can such a person help you ne business rako iye asina kana mari – u know all these things are said about maPostori.
Asi ini ndisatii ndaziva nezve Church yandiri kupinda iyi ndakaenda kune mumwe muPostori akandi porofita akandi udza tunyaya nyaya tweku mhuri yangu of which ndika tarisa zviri kuitika mumhuri medu I can see kuti muporofita uyu anga ari spot on. Muporofita uyu akatora time yake neni handina kungo rohwa rohwa musoro ne anointed hand, asi akandi tsanangurira paiva nemost of ma problems angu uye akandi batsira ku avoida mamwe ma situation aizondi konzeresera ma problems of which I appreciate. Dambudziko maje ranga riri pakuti my situation never changed much. Ndaka shandisa mvura nematombo etc asi my problems were not really solved.
So now ndoita zvipi vehama? Ndoenda here kuma postori just for the prophecy without kushadisa mvura nematombo ndobva ndaramba ndichi zvinamatira or what? Kuti ndikwanise kuwona vana Man of God veku church kwangu ndinofanira kunge ndine mari eg Like some of u might know kana ndichida kuenda kuno wona Prophet Magaya (From SA to Zim) for one on one I need about R3 000 yetransport plus accommodation ku guest house only. Hanzi you can’t see the man of God empty handed saka ne Seed inenge ichitodiwa. I cannot afford such an amount at the moment. Asi solution ndinenge ndichiida. If you see the number of people who flood vachienda ku PHD ministries on a Sunday you will see kuti vanhu vane zviri kuvanetsa uye we all want solutions. What is your take on this situation. Please musandi tuka I know my thoughts are scattered all over the place asi ndinokumbirawo mundibatsirewo nepamunge manzwisisa.